အလွန်အလုပ်များတဲ့ ၁၂ လပိုင်း။ အလုပ်ရှုပ်တာဟာ သက်ရှိလူသားတွေချည်းပဲမဟုတ်ခဲ့ပါ? ဘိုးဘေးတွေပြန်လာတဲ့ နှစ်သစ်ကူး ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ - JAPO Japanese News
လာ 25 Apr 2022, 16:57 ညနေ
၁၂ လပိုင်း ၃၁ ရက်နေ့။
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကို ဂျပန်လို “大晦日” (အိုးမိဆိုခ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ လတစ်လရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကိုတော့ 晦日（みそか） “ မိဆိုခ” လို့ခေါ်တဲ့အတွက် တစ်နှစ်လုံးအတွက်နောက်ဆုံးရက်ဆိုရင် 大晦日(အိုးမိဆိုခ) လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီ 大晦日(အိုးမိဆိုခ) နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့ကိုဦးတည်ပြီး၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် နှစ်စဥ်အထူးအလုပ်အရှုပ်ဆုံးက ဟောဒီ ၁၂ လပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ၃ လပိုင်းကုန်ဟာ စာသင်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ လုပ်ငန်းအများစုရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းချုပ်ကာလကလည်း ၃ လပိုင်းပဲဖြစ်တာကြောင့်၊ ၃ လပိုင်းကုန်ဟာ အမှန်တကယ်အလုပ်ရှုပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ၁၂ လပိုင်းအတွင်း အပြီးသတ်စရာရှိတာတွေအားလုံးကို အပြီးသတ်ကြပါတယ်။
နှစ်ပတ်လည်နှုတ်ဆက်ခြင်းတို့၊ year end party တို့ပြီးသွားပေမဲ့၊ လုပ်လက်စအလုပ်ကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် နှစ်မကုန်ခင် အပြီးသတ်ကြတဲ့အတွက် တကယ်အလုပ်ရှုပ်ရပါတယ်။ ၁၂ လပိုင်းကိုတော့ သီးခြားအမည်အဖြစ် 師走（しわす） “ ရှီဝဆု” လိုခေါ်ပါတယ်။ ဆရာသမားတွေပြာယာခက်လောက်အောင်ကို အလွန်အလုပ်ရှုပ်တဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့ ကုမ္ပဏီအများစုဟာ ၁၂ လပိုင်း ၂၈ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးအလုပ်တက်ရက်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်၊ အားလပ်ရက်ကိုရောက်ရှိသွားပေမဲ့၊ အဲ့ဒီကနေ နှစ်သစ်အတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာကို ပြင်ဆင်ပါတယ်။
အကြီးစားသန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်တယ်၊ နှစ်သစ်စားပွဲအတွက် ပြင်ဆင်စရာတွေ ပြင်ဆင်တယ်။ အထူးသဖြင့်အလုပ်ရှုပ်ဆုံးက ၁၂ လပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့၊ ဒါဟာ သက်ရှိလူသားတွေချည်းပဲ မဟုတ်ဘူးတဲ့… တကယ်တော့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက် နှစ်သစ်ကူးအကြိုရက်မှာ ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဝိညာဥ်က အိမ်ကိုပြန်လာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လျှက်နဲ့ အရင်ကမသိခဲ့ပါဘူး။
လာမည့်နှစ်၏ 歳神様တိုရှီဂါမီနတ်ဘုရားအား ကြိုဆိုဝတ်ပြုဖို့ ပြင်ဆင်လျှက်၊
ယခုထက်ပို၍ အညစ်အကြေးများမစွန်းထင်ဖို့ အိမ်ထဲ၌နေမည်။
ဒါဟာ (အိုးမိဆိုခ) နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ဖြတ်သန်းပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ၁၂ လရာသီခွင်နဲ့ကိုက်ညီပြီး နှစ်စဥ်မတူညီတဲ့ 歳神様တိုရှီဂါမီနတ်ဘုရားကို ကြိုဆိုခေါ်ဖိတ်ပြီး၊ လာမယ့်နှစ်မှာ ပျော်ရွှင်ရပါလို၏… ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆုတောင်းကြပေမဲ့၊ ထို歳神様တိုရှီဂါမီနတ်ဘုရားကိုကြိုဆိုဖို့အတွက် ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဝိညာဥ်ကိုလည်း ပြန်ယူဆောင်လာရပါတယ်။
ထိုဘိုးဘေးတွေရဲ့ဝိညာဥ်ပြန်လာတာက ၈ လပိုင်း အိုဘွန်းရာသီတစ်ခုတည်းလားလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့၊ တကယ်တော့ နောက်တစ်ကြိမ်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် (အိုးမိဆိုခ) ရက်ဖြစ်တဲ့ နှစ်သစ်ကူး ၃ ရက်လုံး သင်္ချိုင်းလည်ပတ်သွားသော်လည်း ဘိုးဘေးတွေသင်္ချိုင်းမှာမရှိပါဘူး။ (အိုးမိဆိုခ) နေ့ဟာ အသက်ရှင်နေသူတွေမှမဟုတ်၊ သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေလည်း အလွန်အလုပ်ရှုပ်တဲ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ် ဆာမူရိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့ အဲဒိုခေတ်က (အိုးမိဆိုခ) နေ့မှာဘာတွေလုပ်ကြသလဲဆိုရင်၊ ၁၂ လပိုင်းမှာ ပွဲတော်အမျိုးမျိုးကို ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
အရင်ဆုံး ၁၂ လပိုင်း ၈ ရက်နေ့နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့ဟာ 煤払い（すすはらい） “ ကျပ်ခိုးသန့်ရှင်းရေးနေ့” ဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်တဲ့နေရာနဲ့ သာမန်အားဖြင့် လက်လှမ်းမမီတဲ့နေရာက ကျပ်ခိုး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖုန်တွေကိုသန့်ရှင်းကြပါတယ်။
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကပ်တွယ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ၂၈ ရက်နေ့မှာ နှစ်သစ်ရဲ့ဆန်ကိတ်ဖြစ်တဲ့ Kagami mochi ကိုအလှဆင်ပါတယ်။
အခုတော့ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာ ရောင်းလာပေမဲ့ ထိုအချိန်ကတော့ ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့လုပ်ကြရပါတယ်။
စကားမစပ် ဆန်ကိတ်ကို ၂၉ ရက်နေ့မှာ လုံးဝမပြင်ဆင်ရပါဘူး။
၂၉ ကို (နိဂျူးခု) လို့အသံထွက်တဲ့အတွက် 二重苦 ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ထပ်တူသွားကျပါတယ်။
(၂ ဆခံစားရခြင်း) လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့အတွက် နိမိတ်မကောင်းပါဘူး။
ဒီအပြင် (အိုးမိဆိုခ) ရက်ကိုရောက်မှ လောလောနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းဟာလည်း ညတွင်းချင်းပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုကပ်သီးရောက်မှ အမြန်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုလည်း သဘောမကျခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီအပြင် အကွဲပြားဆုံးကတော့ ရက်စွဲပြောင်းလဲချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ည ၁၂ နာရီကိုပုံမှန်အားဖြင့် ကူးပြောင်းချိန်လို့ မှတ်ယူလေ့ရှိပေမဲ့၊ ရှေးတုန်းက နေဝင်မိုးချုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ထပ်နေ့တစ်နေ့ကိုရောက်လာတော့မယ်လို့ တွေးကြတဲ့အတွက်၊ နေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်သစ်ကူးကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ပုံမှန်နေ့မှာတော့ ‌နေဝင်တာနဲ့လုပ်စရာရှိတာတွေကို လက်စသတ်ပြီးအိပ်သွားကြပေမဲ့၊ ဒီနေ့လေးကတော့ ထူးခြားပါတယ်။
ညဘက်မအိပ်ဘဲ 歳神様 တိုရှီဂါမီနတ်ဘုရား ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြပါတယ်။ (အိုးမိဆိုခ) နေ့မှာစောစောအိပ်ရင် ဆံပင်တွေဖြူကုန်တယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိတဲ့အတွက် အချို့ဆိုတစ်ညလုံးမအိပ်တော့တဲ့လူတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအပြင် ယခုထိတိုင်ကျန်ကြွင်းတဲ့ “ တိုရှိခိုရှိ ဆိုဘ” ဆိုတဲ့ယဥ်ကျေးမှုဟာလည်း အဲဒိုခေတ်မှာ ‌ပေါ်ထွန်းခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတိုင်း ဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုစားကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပါယ် ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ဆိုဘခေါက်ဆွဲဟာရှည်လျားတဲ့အတွက် “ အသက်ရှည်ပါစေ” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ဆိုဘခေါက်ဆွဲဟာ ပြတ်လွယ်တဲ့အတွက် “ဒီနှစ်ရဲ့ မကောင်းမှုတွေနဲ့ အကြွေးတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီး နောက်နှစ်အထိ ဆက်နွှယ်မှုမရှိရပါစေနှင့်” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုးနဲ့စားသုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အကြွေးကတော့ ဆပ်ရမှာပေါ့နော်…
၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ (အိုးမိဆိုခ)နေ့ဟာလည်း ရောက်ရှိလာအုံးမယ်ဆိုပေမဲ့၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဟာ ကမ္ဘာမှာကပ်ရောဂါအပြင် စစ်ပွဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ ဒီလိုမနှစ်မြို့စရာအခြေအနေကို နှောင်နှစ်တိုင်မရောက်ရှိဖို့၊ ဆိုဘများများစားပြီး ဖြတ်သန်းကြပါစို့…
(၆) ရက်နေ့၊ တိုကျိုကူးစက်မှုအသစ် ၁၅၉၁ ဦးဖြင့် အမြင့်ဆုံးစံချိန်ထပ်မံချိုးခဲ့ !!!!